Hargeysa(BGN) Siyaasiga Caanka ah ee Cabdillaahi Cabdi Xaaji Cumar(Cabdillaahi Jawaan) ayaa ka hadlay arrimo kala duwan oo durruf ahaan haatan ka taagan dalka, sida abaaraha, khilaafka albaabada u laabay jaamacadda iyo khilaafka doorashada ka taagan.
Cabdillaahi Jawaan oo khadka telefoonka kula soo xidhiidhay wargeyska Ogaal, isagoo jooga magaaladda Hargeysa, wuxuu ugu horayn ka hadlay abaaraha saamaynta xooga leh ku yeeshay nolosha bulshada ee ka taagan dalka. Waxaanuu ugu horayn hadalkiisa ku bilaabay oo uu yidhi;“Waxaan Jeclahay inaan ka hadlo Saddex Arrimood oo maalmahan ka taagan Waddanka oo ay ugu horreeyaan Abaaruhu, Jaamacadda Hargeysa iyo Doorashooyinka Muranku ka taagan yahay, saddexdaa qodob baan doonayaa inaan taabto.”
Jawaan oo ugu horayn ka hadlaya xaalada abaartu wuxuu yidhi; “Waxaan ku horeynayaa Arrinta Abaaraha, Runtii Abaar aad u xun oo aad u dhibaato badan baa ka jirta Gobolada Somaliland, gaar ahaan Gobollada Awdal, Salal, Gebilay, Hawd iyo Maroodijeex, markaa waxaan ku baaqayaa in si heer Qaran ah loogu gurmado oo biyo iyo baadba lala gaadho. Waxaan arkaayey Odayaalxildhibaano ah oo ka hadlayay abaarta oo Gobol ahaan u hadlayay, laakiin anigu waxaan u arkaa inay haboon tahay in madaxweynuhu u saaro gurmadka arrintaa guddi qaran, si qaab heer Qaran ah loogu gurmado”. Siyaasi Cabdillaahi Cabdi Xaaji Cumar wuxuu intaa ku daray, in taasi suuragelinayso in la helo qiimayn buuxda iyo gurmad si dhakhso ah loo gaadhsiiyo dadka iyo duunyada.
Dhanka kale Cabdillaahi Jawaan wuxuu ka hadlay fadeexadda khilaafkla albaabada u laabay jaamacadda hargeysa, isla markaana wuxuu soo jeediyay tallooyin lagu suulin karo ismaan dhaafka taagan. “Qodobka kale ee aan ka hadlayaa waxa weeye jaamacada. Jaamacadda Hargeysa maalmahan waxa ka taagnaa Buuq iyo Rabshad aan loo baahnayn, kacdoon dhallinyaro iyo is daba yaacyaac, markaa Jaamacadu waxa weeyaan Muraayaddii Dalka, waa xarunta ugu weyn ee Waxbarasho ee waddanka, Masuuliyiintii Mustaqbalka waddanka hogaamin lahayd, qaar soo hogaamiyay ama qaar imika hogaamiyaaba ay wax ku barteen.Waxa ka soo baxay oo wax ku bartay rag illaa heer Madaxweyne soo qabtay, kuwo Wasiirro ah, run ahaantii aad baan uga damqanayaa in Jaamacadii u xidhan tahay khilaaf soo dhex galay Maamulka Jaamacadda. Taasina ceeb bay inagu tahay Qaran ahaan, khilaaf yar oo dhexdeena ah innamadeenii oo murmay in aynu heshiisiin kari wayno, ama ka qaldan runta loo sheegi waayo.”
Cabdillaahi Jawaan oo arrintaa ka sii hadlayaa wuxuu yidhi; “Xogogaal baan u ahaa muddaba waxa dhacayay, in guddiyo loo saaray oo ay dhammayn waayeen, kadibna Madaxweynuhu u igmaday xalinta hawshaa Madaxweyne Xigeenka. Madaxweyne ku xigeenkii go,aan soo saaray, go’aankii Madaxweyne Xigeenkuna fuli waayay, markaa waxaan leeyahay arrinta yaan la reeraynin, waayo Hargeysa waa isku mid, markaa waxaan leeyahay Jaamacadeenaa aan wada ilaashano, arrintana hala xaliyo oo xal looma waayine run haloo galo, in la yidhaahdo go,aankii madaxweyne xigeenka waa la fulin waayay ama wasiir baa diiday qaran ahaan waa inagu ceeb, markaa waxaan leeyahay go’aankaa Madaxweyne xigeenku gaadhay la fuliyo.
Waxaan arkayay Xisbiyada Mucaaridkoo leh madaxweyne xigeenku ha is Casilo, fuul xumay inagu tahay Xisbiyada mucaaridku waxay eeganayaan goldalooyinka oo ay ku garaacayaan laakiin dantii Qaranka ayay wax u dhimaysaa, markaa waxaan leeyahay taladii uu bixiyay Madaxweyn xigeenku ha la raaco, Madaxweynuhuna ha ku dhiirado inuu go’aankaa meel mariyo”.
Cabdillaahi Jawaan oo ka mid ahaa komishankii doorashooyinka ee ugu horeeyay ee qabtay sadexdii doorasho ee ugu horeeyay, isla markaana mar gudoomiye ka ahaa komishankaasi wuxuu ka hadlay muranka doorashooyinka iyo masuuliyadda komishanka doorashada. Mar uu arrintaa ka hadlayayna wuxuu ku bilaabay oo uu yidhi; “Ta Doorashooyinka waxaan leeyahay maalmahan waxa ka taagnaa buuq illaa haddana wuu taagan yahay, wixii lasoo qaadaaba waa Madaxweynaha iyo Ku Xigeenka, horta waxaan doonayaa dadka inaan u caddeeyo, Madaxweynuhu waa Madaxweyne Qaran oo la doortay, laakiin Guddida Doorashooyinka ayaa Doorashada waajibaadkeeda iyo Cayimaadeeda iyo fulinteedaba iyagaa leh, markaa waxaan leeyahay, had iyo jeer waxaan maqlaa Madaxweynuhu Doorashadii dib buu u dhigayaa, markaa waxaan leeyahay Mucaaridku ha iska daayaan madaxweynahaa doorashada qaban waayay, oo Komishan baa u dhisane, Komishanku Doorashada ha qabto ha yidhaahdaan, hadday xilkooda gudan waayaana ha ku dhalliilaan Komishanka.”
Wuxuu intaa ku sii daray oo uu yidhi; “mucaaridka, waxa laydinka hayay Sharci maaha mudda kordhintu, haddana markii dambe waa tii la yidhi go’aan baa la isla gaadhay, Xukuumadda iyo Xisbiyada Mucaaridka iyo KULMIYE oo wada socdaa isla af garteen, way wanaagsan tahay oo waa sidaynu wax ku dhammayn jirnay, laakiin halkay ka qaloocataan taabanayaa. Waxa weeye, saddexdaasi midna xaq uma leh Doorasho mudaynteeda mana goyn karaan, Sharciyan Talay leeyihiin, go’aanka ay isla gaadheena waxa seegtay inay Komishanka u gudbiyaan oo ay yidhaahdaan go’aankaasaanu gaadhnaye fuliya, markaa Komishanku miisaamo hadday duruuftu u saamaxayso maalintaa u cayimaan. Markaa waxaan leeyahay arrinta yaan dib la isugu tuurtuurine Komishanka ha loo daayo, Komishankuna shaqadoodii oo la isku haysto yey ka aamusine haka hadlaan, hay’ad walbana shaqadeeda ha loo daayo. ”
Previous articleWasiir Xirsioo Been abuur ku timaamay Warqad La sheegay in uu u Qoray Xukuumada ka talisa magaalada Muqdisho o La Xodhiidha Dekada Berbera
Next articleGolihii Guurtida Ee Aanu Soo Xulnay Waxa Ka Nool 7, Go,aankii Xisbiyada Iyo Guddida Doorashadana Waa In, Suldaan Xasana Waxaan Leeyahay…Sul.Maxamed Sul.